Walii galteen biyyonni sadeen Masri, Sudaani fii Toopiyaan dhimma laga abbayyaa irratti waliin qabaachaa turan gara jallinaatti deemaa jiraachun gabaafame jira. - Welcome to bilisummaa
Walii galteen biyyonni sadeen Masri, Sudaani fii Toopiyaan dhimma laga abbayyaa irratti waliin qabaachaa turan gara jallinaatti deemaa jiraachun gabaafame jira.
bilisummaa September 16, 2015	1 Comment
Waajjiraale qormaata miidha laga abbayyaarratti ethiopian raawwataa jirtu akka qoratuuf eggama ture keysaa waajjirri Holandaa dhibbaa motummaan ethiopa irratti gad-geysiten hujii qormaata kanarraa of dhaabe jira.
Haala kanaan waajjirri tokkochi midhaa hidha ethiopia kanaan biyya masri fi sudaan irra dhufuu jiraatu qoratu waajjira faransaa duwwatu hujii qormaata kanarratti bobbahuuf jiraataa .
Garuu Waajjirri faransaa kuni gara motummaan ethiopiatin fudhatama haa qabaatu male gara biyya egypti fi sudaanin kan fudhatama hin qabne hoggaa tahu haalli kuni wali-galte biyyota sadenii irra midhaa guddaa fida jechu dubbataa jiru keysa beytonni haala masrii sudaani fi ethiopia.
Guutuu isaa..dubbisuuf as tuqaa
Previous Diraamaa Dambalii Kutaa 10ffaa
Next Aartisti, Hayyuu Seenaafi Goota Oromoo Sayyoo Dandanaaf Finfinnee 6kiiloo Galma G/G aadaa Itoophiyaaati Fulbaana 9,2008 waaree Booda Tumsa Haa goonuf!